C-da Caruurnimada Ronaldo Sheeko dheeraad ah Xogta Aan Cadeyn
Soo dhawow!Log galay xisaabtaada
Ma ilowdey isticmaale
Kabsadaan aad password
Maxaa Loogu Tala Galay Dhalashada
Sababta Xaqiiqooyinka Taariikhda Nolosha Ee Loogu Tala galay
Shuruudaha iyo Xaaladaha
Soo dhawow! Log galay xisaabtaada
Ilowday password aad? Hel caawimo
password A la e-soo diri doonaa in aad.
Home YURUB IYO YURUB C-da Caruurnimada Ronaldo Sheeko dheeraad ah Xogta Aan Cadeyn
YURUB IYO YURUB
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee Legend Football League oo loo yaqaan 'Nickname'Sultan of Stepover'. Ciyaalkayaga C Ronaldo ee Sheeko Xogta Weyn Xogta Lahaanshaha Xogta waxay kuugu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekada Life ka hor inta Fame, Nolosha Qoyska / asalka ah iyo qaar badan oo OFF iyo on qaylada dhabta ah ee la ogaa oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay khilaafka dheer ee sanadka uu la leeyahay Lionel Messi. Si kastaba ha ahaatee, dhowr ciyaaryahan oo kaliya ayaa ka ogaanaya Ronaldo ee Bio oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Waa maxay Isabel Rosa Da Piedade Marna Maqla
Marka C Ronaldo uu weyneeyo, Isabel Rosa da Piedade ayaa ka tagtay waddankeeda Praia ee Cape Verde, da'deeduna ahayd 16 si ay ugu noolaato Island Atlantic Island oo la yiraahdo 'Maderia', wax waligeed malaha malaha; in seddex qarni ka dib, mid ka mid ah faraceeda loo magacaabi lahaa 'Cristiano Ronaldo' waxaa loo tixgelin doonaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican taariikhda adduunka.
Sanado badan ka dib, gabadheeda weyn, Maria Dolores dos Santos Aveiro ayaa dhalatay xiddiga ugu caansan kubada cagta adduunka. Wiilkaasi, Cristiano Ronaldo waa mid ka mid ah kaliya ma ahan kubada cagta adduunka muddo ka badan toban sano, laakiin wuxuu ku dhacay jasiiradda Cape Verde ee halyeeyada khariidada weyn.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Nolosha Hore
C Ronaldo ayaa ku dhashay 5th-February ee 1985 ee Cape Verdean Island ee Madeira (haatan oo uu dalbaday Portugal). Sidaa darteed, Ronaldo Ronaldo (sawirka hoose) wuxuu ku dhashay São Pedro ee Madeira Island City Capital, Funchal, Portugal. Waxa uu ku dhashay aabihiis, José Dinis Aveiro (beerta beerta) iyo hooyadiis, Maria Dolores dos Santos Aveiro (cunto kariye).
Cristiano Ronaldo ayaa ku dhashay Kaniisada Funchal ee Santo António. Isagoo ah kan ugu yar ee afar caruur ah oo uu dhalay waalidkiis, Ronaldo waxa uu ku faraxsan yahay aabihiis oo magaciisa lagu magacaabo Ronald Reagan. Bixinta Ronaldo wuxuu la wadaagay aabihiis oo aad u xoog badan oo uu la socdo José Aveiro si ay u qabato beeraha uu shaqeeyo.
Oh Haa! waxa uu si ba'an u ciribtiray, oo uu iska soo tuuray iskudubarid la'aan isaga oo iska dhigaya inuu ku qaylinayo waalidkiis marka uu galo dembi. Inkastoo sidan oo kale, walaalahoodii weynaa waxay ku eedeeyeen inuu kufsaday. Waxaa laga yaabaa inaad xiiseyneyso inaad ogaato in Ronaldo uusan marnaba dhar ka dhicin. Waxa uu haystay dhar aad u adag oo ah dhar daboolay qoyskiisa saboolka ah.
Markii uu Ronaldo da 'yaraa oo da' yaraa, wuxuu ku biiray Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco halkaas oo uu bilaabay waxbarashada aasaasiga ah. Inkastoo uu ku jiray iskuulka, Ronaldo ma uusan xiiseynin tacliinta, laakiin wuxuu ka walwalsan yahay inuu la socdo aabihiis aabaha Andorinha Football in Funchal, halkaas oo uu aabihii Ronaldo u ahaa shaqo dheeraad ah oo uu ka mid yahay nin xiran.
Dhaqdhaqaaqa Ronaldo ee iskuulka ayaa si aad ah u xoogeystay markii uu koray. Marnaba ma sameyn doono shaqadiisii ​​guriga, lakiin halkii uu ku sii fiicnaan lahaa kubada cagta. Isagoo jira da'da sideed, wuxuu horayba ugu biiray kooxda kubada cagta ee Andorinha halkaas oo uu u ciyaaray sida hiwaayadda sida sawir hoose. (Marka labaad ee bidixda safka labaad).
Ricardo Santos, oo haatan ah tababaraha kooxda Andorinha ayaa xusuusiyay in halyeeyga kubada cagta uu ahaa mid aad u jilicsan oo dareen ahaan jilicsanaa markii uu joogay Andorinha FC. Sida laga soo xigtay Ricardo;
"Ronaldo xaqiiqdii waa uu jecel yahay guusha" ayuu Santos ku daray. "Marka aysan taasi dhicin, Ronaldo wuu qayliyay. Si aad u badan ayuu u lahaa magaca naanaysta 'crybaby'. "
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Ka Saaray Dugsiga Da'da 14
C. Ronaldo ayaa kursi ka saaray mid ka mid ah macalimiinta markii uu ahaa 14. Horumar taasoo keentay inuu dugsiga ka eryo. Sida laga soo xigtay wargeysyada, wuxuu sheegay inuu macallinkiisa u sharaxay isaga oo ku dhaleeceynaya funaanada Cape Verdean isagoo sheegay in kubada cagta aysan ku weyneynin.
Waxay ahayd dhacdadan ka dib markii waalidkii Ronaldo ee Ronaldo uu xalinayay in uu diiradda saarayo kubada cagta halkii uu ka ahaan lahaa iskuulka. Go'aanka ugu muhiimsan wuxuu horseeday samaynta halyeeyga aan ognahay maanta.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Aabaha Aalkolada
Ronaldo ma cabo sababtii ugu weyneydna waa in aabihiis xitaa inkasta oo uu ka fiicnaado, wuxuu ahaa khamri aan la aqbalin. Bishii Sebtembar 2005, Ronaldo ayaa ciribtirmay markii aabbihiis uu u dhintay dhibaatooyinka beerka ee la xiriira khamriga.
Waxa uu ku geeriyooday kulankii isreebreebka Koobka Adduunka ee Portugal ee ka dhacay Russia. Inkastoo dhaawiciisa shakhsi ahaaneed uu Ronaldo go'aansaday inuu ciyaaro.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Kufsi kufsi
Cristiano ayaa waxaa hakiyay gabadh warbaahin ah oo kufsi kufsi ah taas oo ku dhamaatay inay hoos u dhacday sababtoo ah caddayn la'aan. Waxaa laga yaabaa in laga tago, lakiin waxa ay keentay furitaan weyn, Ronaldo ayaana sheegay in dhamaadka xilli ciyaareedkan uusan ku raaxeysaneynin wax soo bandhigis ah oo soo jiidatay eedeymaha.
Tani waxay ahayd waxa run ahaantii dhaca. Bishii Oktoobar 2005, bil ka dib markii aabihiis dhintay, Ronaldo ayaa lagu xiray isagoo lagu tuhunsan yahay in uu kufsi gareeyey hoteel ku yaalla London hotel isagoona sii daayay dammaanad. Ronaldo ayaa beeniyay eedeymaha waxaana lagu soo oogay Scotland Yard bishii November 2005 sababta oo ah "caddayn ku filan".
Ronaldo ayaa ku dhawaaqay hadal uu ku yiri: "Waxaan mar walba si joogta ah u difaacay eedeymaheena wax walba oo qalad ah, waana ku faraxsanahay in arrintaani ay soo gabagabeyneyso si aan u xoogga saaro inaan u ciyaaro Manchester United.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Kufsashada Gabadha
Xilli ciyaareedkii hore ayaa la sheegay in Cristiano Ronaldo uu xiriir la leeyahay garsooraha reer Morocco ee 'Hari'. Warbixinta daacad ah ayaa soo baxday ka dib markii sheekooyin lagu soo bandhigay saxaafada Isbaanishka ah ee uu safar ugu tagay Morocco si uu u arko Hari.
Kubadsameeyaha reer Portugal, oo loo yaqaano inuu yahay saaxiib ka mid ah saaxiibada asaliga ah, ayaa la sheegay in uu si joogta ah u booqdo saaxiibkii kickboxer Badr Hari ee 'cuddles'. Sawirada kor ku xusan waxay la socotaa ereyadeeda: 'Just is married. Hahahaha '
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Aabaha Afar Caruurta
Xiddigii hore ee Manchester United ayaa aabihiis da 'ahaan u dhalay da' 25 markii uu ilmo yar dhashay, Cristiano Jr, wuxuu ku dhashay Juun 2010.
Cristiano Ronaldo marnaba si cad ayuu u shaaciyey magaca wiilkiisa hooyadiis, laakiin Cristiano Jr waa ciyaaryahan caan ah oo ka mid ah nolosha xiddigga, waxaana inta badan u muuqda aabihiis aabihiis xaflad abaalmarin ah.
Janaayo 2017, todobo sano kadib dhalashada Cristiano Jr, qoyskiisa Ronaldo ayaa koray labo ciyaaryahan sida xiddiga reer Portugal ayaa shaaca ka qaaday inuu cunug cusub cunay ka dib markii uu ka soo laabtay Confederations Cup.
Labada mataano, wiil iyo gabadh, ayaa lagu soo waramayaa in loo magacaabay Mateo iyo Eva, waxaana la sheegay in la soo jiitey caawimo hooyo ku meelgaadh ah.
Ka dib dhalashada labadiisa mataan ee xagaaga ee 2017, waxaa jiray gunuunaca ah in Ronaldo uu soo dhaweynayo afarta sanno ee soo socota qoyskiisa.
Wararkii ugu danbeeyay ayaa la xaqiijiyay in 32-jirkaan uu filanayay cunugiisii ​​ugu horeysay ee uu la noolaa saaxiibtiis Georgina, kadibna u dhashay gabar magaciisu yahay Alana Martina.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Sababta Sababta Maxay Tahay Heesaha
Waxaad arki doontaa in boqolkiiba tiro badan oo ciyaaryahano xirfadlayaal ah, iyo caanka ah, ay leeyihiin ugu yaraan hal tattoo. Kuwani inta badan waxay matalaan caqabadaha ay soo mareen si ay u gaaraan heerkooda guusha, laakiin Ronaldo waa mid ka mid ah ciyaartoyda yar ee aan lahayn khad.
Tani waxay si gaar ah u la yaaban tahay iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in uu marayo waqtiyo adag waana xiddiga ugu weyn kubada cagta adduunka, sababtuna waxay tahay sababtoo ah wuxuu si joogto ah ugu deeqaa dhiigga.
Dalalka qaar, waa inaad sugto illaa hal sano ka dib markaad qaadato shahwo dhiig ah, sidaa daraadeed Ronaldo ayaa kudheer. Waxa kale oo uu noqday deeq bixiye laf dhab ah.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Matxafka CR7
Ronaldo haatan wuxuu leeyahay matxaf u gaar ah oo ku yaala wadankiisa Madeira. Matxafku wuxuu ka kooban yahay dhammaan awaamiirta iyo koobabyada (ka badan 150), oo leh qol dheeraad ah oo loo heli karo koobab mustaqbalka, kaas oo uu rajeynayo inuu ku guuleysto.
Qeybta koowaad ee bandhiggu waa koobkiisii ​​koowaad ee abid oo uu ku guuleystay kooxda caruurnimadiisa, Andorinha markii uu ahaa kaliya 8 sano jir ah. Matxafku waa in la wadaago dhammaan guushii uu la gaaray sanadihii la jiray taageerayaashiisa, waxaanan hubaa inaan wax khasaare ah u keeneynin ego.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Fashion Sense
Ronaldo ayaa furay nasiib wacan oo xamaasadeysan oo ku yaala xNUMX oo ku yaala magaaladiisa, iyada oo uu furmay labaad ee Lisbon ee 2006. Magaca calaamadda, "CR2008" wuxuu u taagan yahay magaciisa iyo lambarka shaatigga, waana naaneeyn uu horumar sameeyay sannadihii la soo dhaafay.
Qalabkani wuxuu iibiyaa dharka iyo qalabka labadaba ragga iyo dumarka labadaba, laakiin alaabta la heli karo ma aha qof kasta, oo leh jilicisyo dhejis ah, suumanka dheeman ee dhirta laga sameeyo iyo qufacaha loo yaqaan patent-ka loo yaqaan 'patent' sida Ronaldo.
Intaa waxaa dheer, xiddiga xiddigga ah ee ganacsigiisu wuxuu bilaabay cologne cusub CRFNUMX cologne ee 7. Sida laga soo xigtay isaga, udgoonku waa "hub qarsoodi ah" oo isaga ka baxsanaya inuu isku kalsoonaado.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Naadiga Hore ee Degaanka
1995, Ronaldo ayaa la saxiixday kooxda Nacional. Tababaraha Nacional ayaa Ronaldo ku guuleystay kubbada weyn ee Ronaldo markii uu kubad ku ciyaarayay Andorinha islamarkaana uu go'aansaday inuu bedelo ciyaaryahan weyn.
Waxa ay aheyd Nacional Ronaldo inuu bartilmaameed weyn u yahay tababarka joogtada ah ee uu qabtay. Casharadii laga bartay Nacional ayaa weli la joogaya illaa taariikhda maaddaama uu sii wadi doono tababarka adag.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Saxeexa Hore ee Xirfadlaha
Ka dib markii uu si wacan u ciyaaray Nacional, wuxuu ku socday tijaabo seddex maalmood ah oo Sporting CP, ka dib markii uu saxiixay. Kabtanka Sporting ayaa kula taliyay tababaraha dhalinyarada inuu saxiixo Ronaldo, oo u muuqday inuu heysto tayo fiican oo kubada cagta ah oo aan waligiis arkin noloshiisa ka hor.
Wuxuu u ciyaaray kooxaha dhalinyarada ee 1997 - 2001. Wuxuu noqday ciyaaryahankii kaliya ee abid ugu ciyaara kooxda Sporting's U-16, U-17, U-18, B-koox, iyo kooxdii ugu horeysay hal xilli ciyaareed gudaheed.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Cudurka wadnaha ee wadnaha
Ka dib markii uu dugsiga ka eryay, C Ronaldo ayaa wacad ku maray inuu cadeeyo inuu macallinkiisa khaldan yahay. Waxa uu ka cabanayay xanuunkiisa isagoo cunaya iyo kubadda cagta. Markii ugu horreysay, wuxuu ka shaqeeyay xawaarekiisa kaas oo soo saaray lugaha weyn ee muruqyada aad ku aragtay isaga maanta. Sidaa awgeed, wuxuu xawaaray xawaaraha xad dhaafka ah ee da'da qandaraaseed kaas oo aad ugu badnaa caruur da'diisu ahayd bilowgiisii. Horumar kaas oo ka dhigay inuu horumariyo cudurka wadnaha.
Cudurku wuxuu ku dhawaad ​​ugu khasaaray inuu kubada siiyo. Shaqaalihiisii ​​caafimaad ee kooxda ayaa ogaaday xaaladdiisii ​​waxayna ka dooneen ogolaansho hooyadiis oo ku saabsanaa qaliin wadnaha ah. Waxa uu maray qaliinka waxana uu ahaa maalmo kadib. Dhowr maalmood ka dib, wuxuu dib u bilaabay tababarka kubada cagta.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Saaxiibka aan la ilaawi karin
Sheekada cajiibka ah ee saaxiibtinimo ayaa ah sida Ronaldo markii ugu horeysay uu nasiib u helay kooxda Sporting Lisbon markii ay soo booqdeen koox dhalinyaro ah isaga iyo saaxiibkiisa Albert Fantrau.
Ciyaarta ka hor, Sporting Lisbon ayaa qortay in qofkii dhaliyay goolasha ugu badan uu aqbali doono akadeemigooda. Kooxda Ronaldo ayaa ku guuleysan doonta 3-0, iyadoo Cristiano uu dhaliyay goolkii ugu horeysay ka hor inta uusan Albert ku darin kaalinta labaad. Goolka seddexaad ee ciyaarta, Albert ayaa shabaqa soo taabtay iyadoo goolhaye uu kubad u soo tuuray kubada islamarkaana kubada u dhiibay Ronaldo seddexaad, markii uu kubada shabaqa ku geliyay.
Markii la weydiiyay sababta uu saaxiibkiisa ugu jawaabay: "maxaa yeelay waxaad iga fiicantahay". Tani waxaa dhowaan soo raacay weriye oo booqdey Albert, kaas oo shaqo la'aan ah, laakiin wuxuu ku nool yahay guri qurxoon wuxuuna ku nool yahay nolol raaxo leh qoyskiisa. Dhamaantood waxaa bixiyay Ronaldo, kaasoo aan waligiis ilaawin saaxiibkiisa taasoo ka gudubtay fursada noloshiisa si uu u caawiyo Ronaldo da 'yar.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Kacsanow inaad ku guulaysato
2003, Sporting Lisbon iyo Manchester United ayaa go'aan ka gaaraya inay ciyaar saaxiibtinimo la ciyaarayaan midba midka kale. Ronaldo ayaa loo doortay inuu ku soo bilowdo line-upka kulanka United. Ka dib markii Sporting ay ku garaacday United 3-1 kulan saaxiibtinimo oo saaxiibtinimo, ciyaartoyda United oo ay ku jiraan Patrice Evra iyo Rio Ferdinand ayaa ugu baaqay Sir Alex Ferguson inuu la soo wareego Ronaldo.
Ma ahan kaliya ciyaartoyda, laakiin Ferguson ayaa sidoo kale la yaabay Ronaldo hibo weyn oo ku aadan kubada cagta iyo darbo xoogan. Ugu dambeyntii, wuxuu United ku biiray £ 12.24 million. Tan iyo markaas tan iyo markaas, Ronaldo ma uusan aheyn kaliya qaab ciyaareedkiisa cajiibka ah, laakiin wuxuu horumariyay xirfadiisa, wuxuu ku guuleystay koobab badan iyo abaalmarin wuxuuna ku adkeystay inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu waa weyn. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Abaalmarinta Dunida Nafsadeed ee Dunida Ugu Dambeesan Dufanka
Nidaamka tababarka adag ee adag iyo cunno adag ayaa Ronaldo ku dhigay xaalad jireed oo sarreeya, isaga oo ka tagay dufan jireed oo ka yar inta badan bacaha. Sicir bararka jirka ee 10% wuxuu Ronaldo u sahlayaa in uu ordo, boodo oo uu fuliyo heer ka sareeya kan ugu badan garoonka dhexdiisa, wuxuuna sidoo kale hubin doonaa inuu awoodi doono inuu ciyaaro heer sarre sanado badan oo uu yimaado.
Heerarka jirka ee aan caadiga ahayn iyo dufanka jirkoodu hooseeyo waxay noqon kartaa sababta uu mararka qaarkood u dhaqso badan yahay inuu ka saaro shaatigihiisa ka dib markuu dhaliyo goolal ama dhamaadka cayaaraha, qofkasta oo dadka oo dhan ku daawanaya xishood.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Awooda ugu weyn ee Kubadda cagta
Dhibcaha Ronaldo ee kubada cagta waa furaha ugu muhiimsan ee kubada cagta, maadaama uu awood u leeyahay inuu kor u kaco daafacyada ugu sarreeya iyo awoodiisa jirkiisa sare macnaheedu waa in iskutallaab ku dhex jira sanduuqa ayaa dhibaato u keeni doona daafacyada. Iyadoo bilawga ciyaarta la ciyaari doono, xiddiga reer Portugal ayaa gaari kara 78 cm garoonka dhexdiisa, waa ciyaaryahan cajiib ah oo ka fiican xiddiga NBA.
Baaskiil aad u sarreeya ayaa si aad ah ugu muhiim ah kubada koleyga, iyadoo ciyaartoyda intooda badani haystaan ​​bareelo ballaaran si ay u soo kabtaan, xabbad jilbaha iyo weeraraan kubada. Haddii Ronaldo uu ahaa qiyaastii lix inji oo dheer, waxaa laga yaabaa inuu lahaa ciyaaro kale oo uu awood u yeelan karo.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Free Kick Speed
Xawaaraha xorta ah ee Ronaldo wuxuu kudhow yahay 130 kilomitir saacad, taas oo macnaheedu yahay mitirka 31.1 halkii labaad oo ka badan afar jeer oo ah xawaaraha rikoodhiga Apollo 11 kaas oo ahaa Mitirka 7.3 halkii labaad.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Diiwaanka Dhibcaha Goolka
Waxa uu sameeyay rikoor cajiib ah markii ugu danbeysay ee uu shabaqa soo taabtay kulankii ay wajaheen Atletico Madrid daqiiqadii 18aad ee ciyaarta. Tani waa tirakoob in Lionel Messi uu dareemayo naxdin. Iyadoo goolkaas uu dhaliyay, Ronaldo ayaa haatan dhaliyay goolal daqiiqad kasta oo ka mid ah ciyaaraha 7.
Rikoorkaan cajiibka ah ayaa cadeynaya sida uu Ronaldo u jecel yahay iyo sida uu u yahay halis mar walba oo ciyaar ah. Waxa uu sidoo kale dhaliyey goolal xNUMX daqiiqadii 20th, isagoo ka dhigay goolka, gooldhaliyaha gooldhalinta iyo gooldhaliyeyaasha iyo mid ka mid ah waqtiyada ugu fiican.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Wayne Rooney Saga
Xaaladda caanka ah ee adduunka ayaa ka dhacday intii lagu jiray kulankii England iyo Portugal ee 2006 World Cup quarter-final-ka, taasoo seddexdii libaaxna ay guuldarro ka soo gaartay. Laakiin bartilmaameedka ugu weyn ee ciyaarta ayaa yimid markii Rooney uu casaan la siiyay 'Rampage Carvalho'. Naadiga Manchester United ayaa si bareer ah u beenisay Ronaldo, garsoore Ronaldo ayaa u duulay garsooraha si uu ugu codsado qaladkaas.
Waxay u muuqatay in Ronaldo uusan aheyn kaliya ku guuleysiga inuu ka caawiyo Rooney inuu casaan qaato, waa uu ku faraxsan yahay sidoo kale. Dad badan ayaa u maleynayay inay dhici karto inay dhamaadka xiddigta Portugal ee waqtiga United ku jirta, lakiin waxa uu ku soo dhameystay seddex xilli ciyaareed oo kale, isagoo ku guuleystay Champions League.
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Prank Football
Cristiano Ronaldo ayaa mar hore ku garaacday kooxda reer Madrid isagoo xiran sida nin aan hoy u aheyn wadooyinka. Xidigga caanka ah ee caanka ah ee loo yaqaan 'Coconut', oo ah kabtanka 30, ayaa ku dhawaaqay inuu yahay xiddiga kubadda cagta ee Spain.
Ciyaaryahankii hore ee Real Madrid ayaa kufaraxay garoonkiisa, shinbiraha wiishka ah iyo gadhka qarxa si uu u cadeeyo wajiga uu jeexjeexay iyo suunka dufanka si uu u dhiso dhismihiisa murqaha.
Kuwa isaga iska dhego tiray isaga oo u arkaya inuu yahay qof guri la'aan ah ayaa weli ka qoomameynaya ficilkooda ilaa taariikhda. Daawo Video hoos ku xusan;
C Ronaldo-da Sheekada Hore ee Xogta Laga Hirgeliyo -Lifebogger Rankings
C Ronaldo Ronaldo
Waa wax aan shaki ku jirin in C Ronaldo uu yahay Legend oo ah labada dhinac Pele iyo Maradona.
Hantida FACT: Waad ku mahadsantahay akhrinta sheekada C 'Caruurnimo ee Caruurnimada iyo xaqiiqooyinka loo yaqaan' Untold Biography '. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Taariikhda Kubadda Cagta ee Juve
Taariikhda Kubadda cagta Portugal
Real Madrid Taariikhda Kubada Cagta
LA XIRIIRA ARTICLESDHEERAAD AH KA QORAAGA
Gedson Fernandes Sheekada Carruurnimada oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Rodrigo Moreno Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Federico Valverde iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Brandon Williams Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Ricardo Pereira Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Federico Bernardeschi oo lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekooyinka Carruurnimada Rafa Silva iyo Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold
Sheekada Carruurnimada Eric Cantona Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Dani Ceballos Taariikhda Carruurnimada Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Joao Cancelo Plus Xaqiiqda Udinld Biography
Sheekada Carruurnimada Mason Greenwood iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Rodrygo wuxuu Tagay Sheekada Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh nololeedka ee aan loo baahnayn
Funkem primus Antepioh Mee 9, 2017 XXX: 10 pm
Wanaagsan ayuu sii ahaanayaa ciyaaryahanka ugu fiican kubada cagta. Aad baan u jeclahay isaga. Waxa uu Real Madrid ku hogaami doonaa Laliga 2016 / 2017 iyo horyaalkii horyaalkii EUFA ee 2017. Ilaah wuxuu sii wadi doonaa inuu siiyo nimcada.
KA BEDDELISTA Cancel reply
Fadlan qor faalladaada!
Fadlan halkan ku qor magacaaga
Waxaad soo gashay cinwaanka email khalad ah!
Fadlan gali cinwaanka emailkaaga halkan
Sheekada Carruurnimada Tom Davies Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
vannyhenrico - February 18, 2020
Sheekada Dhalashada Marcelo Brozovic oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography
Sheekada Carruurnimada Mason Holgate Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
vannyhenrico - February 18, 2020 0
vannyhenrico - February 16, 2020 0
Kaynaan Mbappe Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Waxaa laga yaabaa 20, 2017
Paul Pogba Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Ronaldo Luis Nazario de Lima Ilmaha Hore Sheeko Xaqiiqo Weedheer Xogta
Waxaa laga yaabaa 13, 2017
YURUB IYO YURUB341
Kubad-sameeyuhu wuxuu leeyahay sheeko caruureed. LifeBogger waxay qabtaa sheekooyinka cajiibka ah, cajiibka ah iyo xiisaha leh ee ku saabsan xiddigaha kubbadda cagta wakhtiyada carruurnimadooda ilaa taariikhda. Waxaan nahay ilbaxnimada ugu wanaagsan dunida ee loogu talagalay Hoyga Carruurta Carbeed.
Nala soo xiriir: lifebogger@gmail.com
© Copyright 2016 - Mawduuca waxaa loogu talagalay HagePlex Technologies
baadi: Content la ilaaliyo !!
Marcos Rojo Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Antonio Valencia Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography'
Paulo Dybala Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha
Waxaa laga yaabaa 29, 2017
Luka Modric Hooyo sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Klaas-Jan Huntelaar Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Robin van Persie Story Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha